चितवनका महत्वपूर्ण प्रायः सबै व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकमासमेत सहभागि भरतपुर अस्पतालका प्रमुख तिवारीलाई कोरोना संक्रमण - हाम्रो शब्द
चितवनका महत्वपूर्ण प्रायः सबै व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकमासमेत सहभागि भरतपुर अस्पतालका प्रमुख तिवारीलाई कोरोना संक्रमण
भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्लामा तरंग पैदा भएको छ । किनकि डा. तिवारीसमेत सहभागी भएको जिल्लाको एक बैठकमा चितवनका महत्वपूर्ण प्रायः सबै व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो ।
३० साउनमा भरतपुर अस्पतालमै एउटा बैठक भएको थियो। तिवारीले कोरोना परीक्षणका लागि ३० गतेअघि नै स्वाब दिएका थिए । स्वाब दिएर उनी उक्त बैठकमा सहभागी थिए । उनको गएराति आएको रिपोर्टमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो ।
तिवारी सहभागी उक्त वैठकमा सांसद घनश्याम दाहाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराई, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी, भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारी, क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतम, पुरानो मेडिकल कलेजका डा. मनोहर प्रधान, नयाँ मेडिकल कलेजका डा. हरिश न्यौपाने, निजी अस्पताल समन्वय समितिका सचिव विक्रम अधिकारी, अस्पताल विकास समितिका सदस्यहरू केशव देवकोटा, रमा घिमिरेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
जिल्लामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर, आइसियू, आइसोलेसन वार्ड के–कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बैठक आयोजना गरिएको थियो ।
त्यसको अघिल्लो दिन डा. तिवारीले परीक्षणका लागि स्वाब दिएका थिए ।
आफूलाई शंका लागेर स्वाब दिएका उनी भोलिपल्ट अर्थात् ३० साउनमा आयोजना गरिएको बैठकमा भने सहभागी भएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै स्वाब दिएपछि रिपोर्ट नआएसम्म कसैसँग भेटघाट नगर्न, हिँडडुल नगर्न र घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्न भने पनि डा. तिवारी सो बैठकमा उपस्थित थिए ।
राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी : आफू पनि नजान्ने अरूको कुरा पनि नसुन्ने ‘अधम’ मान्छेले सरकार चलाइरहेको छ